Backpacking trip to Ngwe Saung | Myanmar Travel Guide
by Phoebe Han on Mar 21, 2017
ကမ်းခြေဆိုရင် ငယ်ငယ်က ပင်လယ်ကြီးကြည့်မယ် အနားယူမယ် seafoodတွေစားမယ် ရေဆော့မယ်. ပင်လယ်ထဲ နဲ့ hotel အခန်းထဲပဲ အချိန်ကုန် စေခဲ့တာ များပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ weekend ကတော့ ပင်လယ်ကမ်းခြေကို ပင်လယ်ထဲမဟုတ်ဘဲ ငွေဆောင်ရွာထဲမှာ ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတာ Explore လုပ်ခဲ့မိတယ်. ပျော်စရာလည်းကောင်းပါတယ်။
ငွေဆောင်မှ ကမ်းခြေအပြင် Night life လည်း ရနိုင်မဲ့နေရာလေးတွေရောက်ခဲ့တယ်။ ကိုယ်ရောက်ခဲ့သလို ငွေဆောင်ကိုသွားမဲ့ ဘော်ဒါတွေလည်း ရောက်တဲ့အခါ သွားစေချင်မိတယ်လေ။ ငယ်တုန်း သွားနိုင်တုန်း လာနိုင်တုန်း အသစ်တွေ ကိုယ့်အတွက်လည်း အန္တရာယ် မဖြစ်နိုင်တာတွေ လုပ်စေချင်ပါတယ်။ ပင်ပန်းတော့ နည်းနည်းခံရမှာပေါ့. . backpack နဲ့သွားရတဲ့ feeling က တမူထူးတာ သွားဖူးတဲ့လူတိုင်းသိတယ်လေ :) ကိုယ့်ကိုကိုယ် confidence ရှိလာမယ်၊ တယောက်ထဲ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ချင်စိတ်တွေပိုဖြစ်လာမယ် :)
ကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့ ခရီးကတော့ ပိုက်ဆံအကုန်အကျလည်းမများဘူး. ပျော်ဖို့လည်းကောင်းရမယ်.
ရေကျချိန် tent နဲ့နေတဲ့နေရာကနေ မြင်ရတဲ့ကျွန်းလေးကို တယောက်ထဲ camera တလုံးနဲ့တက်သွားရတာ. .
• ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ? •
ရန်ကုန်ကနေ ငွေဆောင် အကျော် သဇင် Beach ကို အရင်သွားခဲ့ပါတယ်။ သဇင် beach ကတော့ ကမ်းခြေမှာ ဟန်ဆောင်မှုကင်းစွာ နေလို့ရတဲ့ နေရာလေးပါ။ ကမ်းခြေရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ပင်လယ်ငူ ဖြစ်နေလို့ မနက်ဆိုရင် နေက ပင်လယ်ထဲကထွက်လာပါပဲ. ကျွန်တော်တို့ အမြဲပင်လယ်သွားရင် Sunset ဆိုတာကို အပြေးအလွှာ ညနေဘက် ပင်လယ်ထဲ နေဝင်သွားတာကြည့်ရတာပေါ့။
နေ့လည်နေ့ခင်းပင်လယ်ကြီးကို ခံစား. .
သဇင်မှာတော့ မနက် ၆ ခွဲလောက် ပင်လယ်ထဲကနေ နေထွက်လာကို မြင်ရကြည့်ရတာ တကယ် awesome ပါပဲ။ နေတာကတော့ Tent နဲ့နေရတာနော်။ မနေဘူး မလုပ်ဘူးသေးရင် လုပ်ကြည့်ပါ ;) ကိုယ်အိပ်တဲ့နေရာနဲ့ ညဘယ်ရေတတ်လာတဲ့ နေရာနဲ့က နီးနီးလေးမို့ ရင်ခုန်စရာပါ။
အိပ်ယာထတာနဲ့ နေကြီးကို ကြည့်ပြီနိုးရတာ
သဇင်မှာ Sea Fan ဆိုတဲ့ restaurant လေးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ Tent တလုံးကို 15,000 ကျပ် နဲ့ပေးနေပြီး အဲ့မှာ ရှိကျတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ service က hotel တွေထက် နွေးထွေးပါတယ်။ အစားအသောက်လည်း ပူစရာမလို စားဖိုမှုး သိပ်တော်ပါတယ်။
Sea fan restaurant က အစားအသောက်တွေ. .
• ဘယ်လိုသွားရမလဲ? •
အဲ့ဒီနေရာကို ဘယ်လို့သွားရမလဲဆို ငွေဆောင်ရွာကိုဖြတ် BOB hotel ကိုကျော်ပြီး သဇင်ရွာ မြွေကျွန်း ရှိတဲ့နေရာလေးပါ။ မြွေကျွန်းဆိုလို့ မလန့်သွားနဲ့နော်. ကျွန်တော်ရောက်တာ ၃ခါရှိပြီ တခါမှ အန္တရာယ်နဲ့မကြုံဖူးဘူးရယ်။ ပင်လယ်ငူဖြစ်လို့ ပင်လယ်လှိုင်းတော့ သိပ်မရှိဘူးပေါ့။ ဒါမဲ့ အေးဆေးပါ. ရေထဲဆင်းစရာမလိုလောက်အောင် နေရတာ peaceful ဖြစ်ပါတယ်။
ညနေဘက်တွေဆို ပိုင်ရှင်ရဲ့ ဝါသနာအရ ဝန်ထမ်းတွေလည်း အနားယူ လာနားတဲ့လူတွေလည်း အဆင်ပြေစေဖို့ unplugged လေးလည်းရှိတော့ အဆင်ပြေတယ်လေ။
• Night Life at Ngwe Saung •
သဇင်ကမ်းခြေကိုသွားရင်း လမ်းရဲ့ ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာ ဆိုင်ကြီး အကြီးကြီးတခုကို သတိထားမိလိုက်တယ်ဆို နေရာလေးသေချာမှတ်လိုက်ပါနော်. အဲ့နေရာက Sport Bar ငွေဆောင်မှာ ဦးဆုံးလုပ်မဲ့ ညလုံးပေါက် DJ. Club လုပ်ထားပေးမဲ့နေရာပါ။ ကမ်းခြေမှာ night life ရနိုင်မဲ့နေရာပဲ။ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ဆို အဲ့နေရာမှာ club ရော Hotel ရော ready ဖြစ်ပြီ. အစားအသောက်ကလည်းကောင်းချက် ငွေဆောင်ရွာထဲက တော်ဝန်ပန်းနဲ့ owner အတူတူပဲမို့ တော်ဝန်ပန်းမှာ စားဖူးကျတဲ့လူတိုင်းသိပါတယ်နော့်။ ကိုယ့်ဘော်ဒါတွေနဲ့ပဲ သီးသန့်လေး သောင်းကျန်ချင်လည်းအဲ့နေရာလေးက Privacy ရှိပါတယ်. Sport bar တနေရာထဲမှာပဲ အချိန်အကုန်လိုက်နဲ့နော်. နောက်တခုရှိသေးတယ်။
ဒါကတော့ Sport bar ရဲ့မြင်ကွင်းပါ. .
• Fire Dance •
အဲ့ဒါကတော့ Fire Dance တွေနဲ့ အပျော်ကြီးပျော်လို့ရမဲ့ နေရာလေးပါ။ ငွေဆောင် ယမုံနာ hotel နဲ့မျက်စောင်းထိုးလောက်မှာ ရှိတဲ့ U Me bar လေးပါ။ တကယ် အမိုက်စား feeling ကိုပေးမဲ့နေရာလေးပါ။ ဓာတ်ပုံရိုက် ဝါသနာပါရင်တော့ ဆွဲလိုက်တော့ ကိုယ့်လူ. မီးတွေကို ရိုက်ရတာ မိုက်တယ်. Tripot လေးတော့ဆောင်သွား. ကျွန်တော်ကတော့ မပါသွားတော့ ပုံတွေနည်းနည်းဝါးသွားတယ်. ဆိုင်တခုလုံး နိုင်ငံခြားသားများတယ်. အေးဆေး chill လုပ်ကျတဲ့လူတွေကြီးပဲ. ဆိုင်လေးကဈေးလဲမကြီးဘူး. အဲ့ဒီဆိုင်မှာ တည အချိန်ကုန်ပြီးသွားရင်တော့ နောက်နေ့ fun activities တွေလုပ်ကြည့်ကျပေါ့။
U Me Bar မှ Fire Dance
• Paint Ball Play •
ကျွန်တော်ဘာလုပ်ခဲ့လည်းဆိုရင် paint ball ပစ်ခဲ့တယ်. Sound fun right!!! ကမ်းခြေမှ ဘယ်သူက ရူးလို့ paint ball ကိုအပူခံပြီး ပစ်မလဲနော်. anyway I did it. It was fun though. :) try it buddies ;) Asia world အရှေ့တည့်တည့်မှာရှိတဲ့ နေရာလေးပါ. ဖွင့်ထားတာသိပ်မကြာသေးဘူးတဲ့. group လိုက်ပစ်ကျရင်ပိုပျော်ဖို့ကောင်းမှာ. 1 group ကို ၄ ယောက်လောက်နဲ့ ပစ်ကျရင် အသေအကျေ ပစ်လို့ရတယ်. ၁ယောက်ကိုမှ ဝတ်စုံပြည့် ကျည်အလုံး ၅၀ ကို ၅ထောင်ပဲပေးရတယ်. ကျွန်တော်ကတော့ Target shooting ပဲလုပ်ခဲ့တယ်. လက်ညှိုးလေးကွေးပြီး ပစ်ထည့်လိုက်လို့ကျည်ထွက်သွားတဲ့ feeling ကို သိချင်ရင် စမ်းကြည့်ပါ buddies. . ;) အဲ့ဒီကနေပြီးလို့ ရွာထဲက sound of coconut ဆိုင်လေးကို ဆက်သွားခဲ့တယ်။
Paint Ball Target Shooting
Group နဲ့ဆို ဒီလို suit တွေ ဝတ်ရမယ်နော်
• Sound of Coconut •
Sound of Coconut ဆိုင်လေးကတော့ အားလုံးသိကျတဲ့အတိုင်း အသံသာလေးတွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာပါ. ဆိုင်ကအစ်မကြီးနဲ့ အာလူးဖုတ်ခဲ့ရင် အနောက်က workshop နဲ့မနီးမဝေး နေရာသေးသေးလေးပဲပေးပြီး ဆိုင်ကို လာလေ့လာတဲ့လူတွေ ထိုင်လို့ရအောင် ဆိုင်လေးလုပ်ပါလားလို့လျှာရှည်ခဲ့သေးတယ်။ သူက လူမနိုင်ဘူးတဲ့ ဘာတွေရောင်းရမလဲတဲ့. အုန်းသီးတွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ လက်မှုပစ္စည်းတွေကြောင့် လူတွေသိပြီးစိတ်ဝင်စားကျတာ အုန်းသီးတွေနဲ့ပဲလုပ်ထားတဲ့ မြန်မာမုန့်ဆိုင်သမျှရောင်းပေါ့မရယ်လို့. လျှာရှည်ခဲ့တယ်. လုပ်တာမလုပ်တာတော့ သူ့သဘောလေနော်. ရှည်ခဲ့ရတာနဲ့တင်ကျေနပ်ပြီ. . :)
Sound of Coconut
ဒါကတော့ ကျွန်တော် သွားခဲ့တာလေးကို ပြန် sharing လုပ်တာပါ. သဇင်မှာပဲနေခဲ့တာတော့ မဟုတ်ဘူး. ရွာထဲက လည်စရာပတ်စရာနေရာတွေနဲ့ အဆင်ပြေအောင် ၁ ညတော့ ငွေဆောင်က De Emerald Sea resort မှာတည်းခဲ့တယ်။ ငွေဆောင်မှာ ပေးရတဲ့ဈေးလေးနဲ့နေလို့ကောင်းပြီး လူမရှုပ် အခန်းလည်းသိပ်မများတဲ့နေရာလေးပါ. အနေအထားလေးကြည့်ချင်ရင်တော့ Google it. ;)
ok.ငွေဆောင်ရောက်ရင် သွားကြည့်ကျနော်. It's worth it. .